Compostable Pepa Mukombe, Biodegradable Pepa Mukombe, Pet muvharo - Futur
Iwe uchasangana neyakavimbika bhizinesi uye timu.
Nekushandisa yedu indasitiri ruzivo, mhinduro nyowani uye kushambadzira kuziva-sei, isu tinogona kukubatsira iwe kuwana chikamu chemusika uye kukura bhizinesi rako. Yedu yekugadzira uye yekupa cheni kugona inoona kuti iwe unogara uine mhinduro dzinodhura.
Futur Technology- mushambadzi & mugadziri wekuchengetedza chikafu kurongedza muChina. Chinangwa chedu ndechekugadzira zvigadziriswe & zvinogadzirisika mapakeji mhinduro anobatsira kupasi redu uye vatengi.
Isu tinoshandisa zvinowedzerwazve zviwanikwa sezvinhu zvakafanana PLA yakagadzirwa kubva kune chirimwa-chibage, bagasse, paperboard..etc.
Kugadzira chigadzirwa chitsva, zvinoda tekinoroji nyowani maitiro matsva ekuti zviitike. Tiri kuita zvakaoma uye kuyedza kuita zvirinani mazuva ese.
Iko kuchinjira kune nyowani & inochengetedzwa kurongedza pasi rese. Kuburikidza nevanhu vedu uye tekinoroji nyowani, tiri kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvekurongedza zvichisangana nemaitiro matsva emutengi mazuva ese.
FUTUR kuputira zvakaputirwa zvinoguma zvaraswa, ivo vanozoputsa nekukurumidza kupfuura kapu yehuni sezvo ivo vari kudyara based uye willeave isina ipurasitiki inokuvadza kumashure.
Imwe yemadziro mapepa kapu
Pfupi Lead Nguva yeChina 5oz Tsika Pringting ...
Yakanakisa Mutengo paChina Iyo Eco-Inoshamwaridzika Biodegrada ...
Chikafu Mudziyo Ine PLA Hwindo
Biodegradable Pepa Bhokisi Vagadziri Vatengesi ...
Biodegradable Plastic Forogo, Banga Nechipunu vagadziri Sup ...
Heavy Duty CPLA Chikafu
Kutsiva mapurasitiki nepepa, aya mapepa ekurongedza anokanganisa fungidziro! Mapurasitiki ndizvo zvinhu zvekusarudza zvekutakura zvekudya nekuda kwemutengo wavo wakaderera, kugadzikana kwakasimba, kurema uye kurema kwehupenyu. Nekudaro, iyo chena kusvibiswa kunokonzerwa nemapurasitiki kunoisa mutoro unorema pane iyo nharaunda ...
Kutsiva plastiki nepepa, th ...
Tisangane nesu @ICPS Shenzhen 28th 30th Oct Isu Takananga ku2021 China South International Catering Packaging Show "2021 South China International Catering Packaging Exhibition" inovavarira kuumba yakasarudzika epasirese nyanzvi yekutsvaga nzvimbo yekuratidzira, kutaurirana, kutengeserana ...
Tisangane nesu @ICPS Shenzhen 28th 30th ...
FRESH 21 ™ Gadzira Pamusoro Pechisimbiso Pabhodhi Tray RINOGONESESA * ZVINOGONESESA * ZVINOGONESESESA * 100% YEMAHARA YEMAHARA 21 ™ Gadzira unovandudza mukushandisa kwetekinoroji yepamusoro kuti ishandiswe zvakare uye inogadzirwa nemidziyo yemapepa. FRESH 21 Gadzira kurongedza kunotaura kune mutengi chishuwo cheshoma ...
FRESH 21 ™ Gadzira Pamusoro Chisimbiso Pepa ...